ကွမ်ကျိုး Focuslaser Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
FOCUS L ကို အာရှာ isaChina famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်များ၏သုံးခုအဓိကမျိုးစက် marking ဖိုင်ဘာလေဆာ, စက် marking စက်နှင့်ခရမ်းလွန်လေဆာ marking CO2 လေဆာရောင်ခြည်များမှာပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ 3D ဖိုင်ဘာလေဆာထွင်းထုစက် (နက်ရှိုင်းသောထွင်းထုစက်) သို့တီထွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆာနည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. , ဒါပေါ်မှာစက်, စက်ဖြတ်တောက်ဖိုင်ဘာလေဆာ, လေဆာဂဟေဆော်စက်နှင့် marking လေဆာပျံသန်း Dynamic ခရမ်းလွန်လေဆာထွင်းထုစက်, Dynamic CO2 လေဆာ engaving စက်။
20 ကျော်စီးရီး။ သိသိသာသာအားသာချက်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ငါတို့ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, သူတို့ကကျယ်ပြန့်အီလက်ထရွန်းနစ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဟာ့ဒ်ဝဲ, မော်ဒယ်-ချမှတ်ခြင်း, အဝတ်အစား, ဖိနပ်, ကြော်ငြာ, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုး, ကစားစရာ-ချမှတ်ခြင်းအဖြစ်ပိုပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့်။
တင်းကျပ်သော အမေး uality ငါ nspection For Machine
စက်ကြိတ်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းထားတဲ့လေဆာမီတာအပါအဝင်စက်များ၏အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးသေချာစေရန်, အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. FOCUS laser, CNC, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မှန်, တည်ငြိမ် AC အ variable ကိုဗို့ပါဝါ emulator, အာရုံစူးစိုက်မှုစနစ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်တစ်ဦးချင်းစီကထုတ်လုပ်မှုခြေလှမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလေဆာကိရိယာများ၏အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်တစ်အပူထိန်းကိရိယာတိုင်းအခန်းတစ်ခန်း, 3D တိုင်းတာခြင်းကိရိယာ, လေဆာ dynamometers, ဒစ်ဂျစ်တယ်တံတားနှင့်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါ။
ကုန်ကျစရိတ် ကို C ontrol
FOCUSLASER တတ်နိုင်, အရည်အသွေးမြင့်စက်ပေးပါသည်။ တရုတ်၏အားသာချက်များ, အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်, ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဂျပန်, ထိုင်ဝမ်နှင့်တရုတ်တို့အတွက်အသင်းတော်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကနေ key ကိုအစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူရေးအတူ။ FOCUSLASER စက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 10-နှစ်ပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့, အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ရေး-ကွင်းဆက်-system ကိုရှိသည်, အရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုအစိုင်အခဲစံချိန်။
FOCUSLASER, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွက်တဆယ်နှင့်နည်းပညာအတူတကွဆောင်တတ်၏အလွန်အရည်အချင်းပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါတယ်။ ဆော့ဖျဝဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတ မှစ. ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းစနစ်စမ်းသပ်ဖို့, နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်ပြီးစီးနေကြသည်။
FOCUSLASER မြင့်မားတဲ့နည်းပညာလယ်ပြင်၌အသက် 23 ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်ရတယ်သိရသည်။ ကျနော်တို့လေဆာလယ်ပြင်၌တစ်ဦးလုံ့လရှိသူ R & D ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပေါများအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံတွင် "Hi-Tech Enterprises" ဖြစ်ပါသည်။
အာရုံစိုက်လေဆာရဲ့ပထဝီတည်နေရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းများလျှော့ချ, ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေးစွမ်းသည်။ FOCUSLASER ဌာနချုပ်ကိုလည်းဟောင်ကောင် Canton အကြောင်းကို 120 ကီလိုမီတာ (75 မိုင်) မြောက်ဘက်-အနောက်မြောက်ဘက်နှင့်မကာအို၏ 145 ကီလိုမီတာ (90 မိုင်) မြောက်ဘက်အဖြစ်လူသိများကွမ်ကျိုးမှာတည်ရှိပါတယ်, ကွမ်ကျိုး 2,200 ကျော်အနှစ်တစ်သမိုင်းရှိပါတယ်နှင့်ရေကြောင်း၏အဓိက terminus ခဲ့သည် ပိုးလမ်းနှင့်အဓိကဆိပ်ကမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာယနေ့အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံသုံးအကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ၏တစ်ဦးအဖြစ်အစေခံနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တိုက်ဆိုင်သည့်စနစ်အားလွယ်ကူစွာ, အများဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများမိတ်ဆက်ခွက်နှင့်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. ရနိုင်ပါပြီဘယ်မှာကျနော်တို့တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်လေဆာကိရိယာများပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။
, ဂျာမနီ, အမေရိကန်, အီတလီ, ရုရှား, ဂျပန်, တောင်ကိုရီးယား: အရည်အသွေးထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း, FOCUSLASER ထုတ်ကုန်တရုတ်မသာအောင်မြင်သောရောင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာထက်ပိုမိုနိုင်ငံပေါင်း 90 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှတင်ပို့ခဲ့ တူရကီ, ဘရာဇီး, အိန္ဒိယ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများ, ထုတ်ကုန်တစ်ဦးအကြီးကြိုဆိုနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲ FOCUSLASER ၏ဖောက်သည်များ '' ယုံကြည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုတန်ဖိုးထား။
အကောင်းဆုံးကိုစျေးနှုန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးစက်တွေကို ပူဇော်. , ဖောက်သည်ဖို့ကျေနပ်မှုအပြီး-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးရန်။